Style No .: SH-1086 အရောင်: အနက် / အဝါရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ထွန်းလင်းယက်ထည်; ခန္ဓာကိုယ် / ပါးပျဉ်းနံရံ: Bejirog သားမွေး; လက်နံရံ - 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း: ပိုးကဲ့သို့အခင်းပါသည့် 260g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်ထားသောတိပ်၊ elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်။ ရှေ့အိတ်ကပ် - သုံးဖက်မြင်အိတ်များ၊ နောက်ဘက်အလယ်ကျောဘက်ခြမ်းရှိဒေါင်လိုက်။
စတိုင်နံပါတ် .: SH-1085 အရောင်: ငွေရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ထွန်းလင်းသောငွေယက်ထည်; ခန္ဓာကိုယ် / ပါးပျဉ်းနံရံ: Bejirog သားမွေး; လက်နံရံ - 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း: ပိုးကဲ့သို့အခင်းပါသည့် 260g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ရော်ဘာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ တိပ်ခွေ၊ elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက် - ၁ × ၁ ပြားချပ်ထိုးထားသော cuff ပေါ်နံရိုး၊ အိတ်ကပ်နှင့်ရှေ့အိတ်ကပ်
Style No .: SH-1083 အရောင်: တော်ဝင်အပြာရောင် / ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ထွန်းလင်းယက်ထည်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; လက် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ဖြင့်ပိုးထည်ထိုးခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Velcro, Snap ခလုတ်၊ ပလပ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်။ 1x 1 ပြားချည်ထားသည့်နံရိုးနှင့်အတူလေဝင်လေထွက်ရှိသည့်လက်တံ cuff
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-1023
Style No .: SH-1023 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; လက် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်များ - အားလုံးသောပန်းထိုး
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-1021
စတိုင်နံပါတ်: SH-1021 အရောင်: အပြာရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; လက် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ပုံစံဖြင့်ပိုးထည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-1019
စတိုင်နံပါတ်: SH-1019 အရောင်: အပြာရောင်အပြာရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ကိုယ်ထည်: Bejirog သားမွေး; လက် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ဖြင့်ပိုးထည်ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-768
Style No .: SH-768 အရောင်: ငွေရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ယက်ထည်ထည် - ငွေအရောင်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ထိုးကွင်း 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic ကြိုး၊ မျက်ခုံး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်။
စတိုင်နံပါတ် .: SH-766 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ထိုးခြင်းလက်ဖြင့်ဆက်စပ်ခြင်း: ပလပ်စတစ်ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း - စင်ကြယ်သောဇစ်သွားများ၊ အထည်ပေါ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ပြုံးနေသည့်မျက်နှာတံဆိပ်မှတ်ချက်များမှတ်ချက် - ၁ လက် ၁ ချပ် - ချုပ်ထားသောနံရိုးပေါ်လက်ကိုင် cuff နှင့်အောက်ဘက်ရှိနံရိုး
စတိုင်နံပါတ်: SH-764 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester pongee ရက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ကွင်း 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ပလပ်စတစ်ကြိုး၊ ပလတ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ခလုတ်နှိပ်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့်တိပ်ဖြင့်ပလတ်စတစ်ဇင့်လက္ခဏာ။
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-763
စတိုင်အမှတ်: SH-763 အရောင်: ငွေရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: ကင်မရာအရောင် ၁၀၀% polyester ရက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း: ပိုးကဲ့သို့သောကွင်းကွင်း 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ elastic binding၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်အင်္ဂါရပ်: အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်တောက်ပသောပလတ်စတစ်မှတ်ချက်များမှတ်ချက်များ: ကင်မရာအားလုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်
Style No .: SH-759 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester 40D ဝိုင်ယာကြိုး; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ကွင်း 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ Snap ခလုတ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်ခြစ်ရာများ: Shell fabric: အားလုံးပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရှေ့အိတ်ကပ်နှင့်ခတ်ပါ
ယောက်ျားလေးရဲ့ padded ဂျာကင်အင်္ကျီ SH-754
Style No .: SH-754 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester 50D ယက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း: ခန္ဓာကိုယ် - ပိုးထည်ကဲ့သို့သောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ လက်များ / ပါးခြမ်း - ပိုးထည်ကွင်း 120g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic ကြိုး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့၊ မျက်ခုံး၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်ထည်အစည်: ပုံနှိပ်အားလုံး